Fivarotana butikety mpivarotra bizina tsara amidy any Dubai - BusinessFinder.Me
- Butikety mpanambady malaza amidy. - Fahafahana tena tsara ho an'ireo vehivavy te hanana ny orinasany manokana fa tsy te handalo ny olana amin'ny fametrahana. - Mihoatra ny 8 taona amin'ny asa aman-draharaha manompo mihoatra ny 600 ny ampakarina eraky ny UAE sy ny GCC ...
- Butikety mpanambady malaza amidy.
- Fahafahana tena tsara ho an'ireo vehivavy te hanana ny orinasany manokana fa tsy te handalo ny olana amin'ny fametrahana.
- Mihoatra ny 8 taona amin'ny asa aman-draharaha izay manambady mihoatra ny 600 ny mpanambady eraky ny UAE sy ny GCC hatramin'ny nanombohana ny orinasa miverimberina.
- Amidy ny orinasa miaraka amin'ny fahazoan-dàlana, anarana varotra, logo ary kit feno.
- Ny efitrano fampisehoana izay vao nohavaozina indray, miorina amin'ny tilikambo fandraharahana miaraka amina toeram-pivarotana natokana hanompoana ny efitrano fampirantiana sy ireo mpanjifa amin'ny làlana lehibe ao Abu Dhabi.
- Ny fivarotana dia miaraka amin'ny tahiry mihoatra ny 800,000 XNUMX AED izay famerenana amin'ny laoniny ny fidiram-bola rehefa miditra amin'ny asa fanofana akanjo mariazy izahay.
- Mihoatra ny 20 ny fifandraisana eo amin'ny orinasa misy trano mpamorona sy mpamokatra akanjo maria eran'izao tontolo izao.
- Tranonkala sy Instagram an-tserasera misy mpanaraka mavitrika mihoatra ny 14k ankoatran'ny kaonty snapchat.
- Ny mpivarotra dia misy mpandray olona 1, mpanjaitra maoderina ary mpanampy amin'ny fanovana (manana fahalalahana feno hitazona mpiasa na hisolo ny mpividy)
- Miaraka amin'ny varotra dia hizara ny fifandraisana amin'ny orinasa rehetra, ny tsiambaratelon'ny varotra ary ny tamba-jotra fiaraha-miasa misy ho an'ny photoshoots akanjo mariazy maimaim-poana.
- Fantsona fidiram-bola fanampiny mbola tsy azo ampiasaina, zaraina amin'ny mpividy.
- Fanohanana 2 volana aorian'ny fivarotana hanampiana ireo mpividy vaovao hilamina.
Fivarotana butikety # mpivarotra amidy
Fivarotana butikety # mpivarotra amidy any Dubai
Fivarotana butikety # mpivarotra amidy ao uae
#Fivarotana fivarotana butikety mpanambady amidy any Dubai
#Fivarotana fivarotana butikety mpanambady amidy any uae
Fivarotana butikety mpanambady #Well Running Dubai izay amidy